Archive du 20191022
Fahavalom-pirenena izay manakantsakana azy tsy handroso, raha ny nambaran’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny faran’ny herinandro teo. Nambarany fa misy ny manakana azy tsy handroso amin’ny heveriny fa fampandrosoana ataony.
Loza mahatsiravina Olona telo indray no maty…
Sesilany ny lozam-pifamoivoizana tao Fianarantsoa tato ho ato, ary saika namoizana ain’olona avokoa.
Malagasy ao La Réunion Hajao ny zon’ny Malagasy tompon-tany
Miitatra hatrany ampitan-dranomasina ny raharaha Ambohitrimanjakana amin’izao.
Bemasoandro Itaosy Olona 130 voapoizina ara-tsakafo
Tafakatra 130 ankehitriny ireo olona lasibatra vokatry ny fahapoizinana ara-tsakafo nitranga teny Bemasoandro Itaosy ny 13 oktobra lasa teo.
Homamiadana sy aretin’ny vanintaolana Mitarika fanaintainana mafy
Betsaka ireo olona miaina fanaintainana hatrany eto amintsika eo amin’ny lafiny ara-pahasalamana.
Fokontany Mahavoky Lakan-drano mirefy 1.900 metatra nodiovina mandritry ny 20 andro
Anisan’ny fokontany manainga zipo rehefa avy ny orona, eny Mahavoky, Besarety iny.
Vola lany amin’ny fanafody 5.000 ka hatramin’ny 100 000 ariary ho an’ ny olona iray
Mandany any amin’ny 5.000 ariary, ka hatramin’ny iray hetsy ariary ny vola lany amin’ny fanafody.